प्रदेश १ का तीनजना मन्त्रीद्धारा राजीनामा, मुख्यमन्त्री राई अल्पमतमा ! – Rajya TV
प्रदेश १ का तीनजना मन्त्रीद्धारा राजीनामा, मुख्यमन्त्री राई अल्पमतमा !
बिराटनगर, १२ पुस ।
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङ्बोलाई बर्खास्त गरेको भोलिपल्ट तीन जना मन्त्रीले राजिनामा दिएका छन् ।
राजिनामा दिनेमा सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरे र सामाजिक विकास राज्यमन्त्री जसमाया गजमेर र उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री विजय कुमार विश्वास रहेका छन् ।
केन्द्रमा नेकपा विभाजित भएपछि त्यसको असर प्रदेश १ मा पनि परेको हो ।
अविस्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारीमा लागेको आरोपमा शनिबार मुख्यमन्त्री शेरधनले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङ्बोलाई बर्खास्त गरेका थिए । यसअघि बादल समूहमा रहेका आङबो प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेर पार्टी विभाजन गरेपछि बादलको साथ छाडेर प्रचण्ड–माधव समूहलाई साथ दिएका थिए ।
बादल निकट रहेका प्रदेश १ का अर्का नेता शावित्रीकुमार काफ्ले पनि बादल केपी ओलीको पक्षमा लागेपछि बादलको साथ छाडेका छन् ।
कुल ९३ सीट रहेको प्रदेश सभामा नेकपाका मात्रै ६७ सांसद थिए । पार्टी विभाजनपछि ओली समूह अर्थात शेरधन राईको पक्षमा २२ जना मात्रै सांसदहरु रहेको बताइएको छ ।
प्रदेश १ मा आफुहरुको ४० भन्दा बढी सांसदहरु रहेको प्रचण्ड–माधव पक्षको दाबी छ । केही सांसदहरु यता उता गरिरहेका छन् ।
पार्टी विभाजनसँगै मुख्यमन्त्री शेरधन राईले संसदीय दलभित्रको बहुमत गुमाएका छन् । यसअघि माओवादीले साथ दिएका कारण भीम आचार्यलाई हराएर शेरधन राई संसदीय दलको नेता भई मुख्यमन्त्री बनेका थिए । माओवादीको साथ नपाएको भए ओली पक्षले प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री पाउने सम्भावना यसअघि पनि थिएन ।
प्रधानमन्त्री ओलीको गृहजिल्ला समेत समेटिएको प्रदेश १ मा पूर्वएमालेभित्रै पनि माधव नेपाल पक्षभन्दा ओली पक्ष कमजोर देखिँदै आएको थियो । यसमा माओवादीले माधव नेपाललाई साथ दिएपछि ओली पक्ष थप कमजोर बनेको हो ।
विशेष गरी मोरङ र सुनसरीमा ओली पक्षको भन्दा माधव नेपाल पक्षको पकड बलियो मानिँदै आएको छ ।